कोरोनाले नर्सिङ शिक्षालाई प्रयोगात्मक बनाउनुपर्छ भन्ने सिकायो - नेपालबहस
कोरोनाले नर्सिङ शिक्षालाई प्रयोगात्मक बनाउनुपर्छ भन्ने सिकायो
| २२:४३:४८ मा प्रकाशित
२० बैशाख काठमाडौं । महामारीका रुपमा फैलिइरहेको कोभिड–१९ विश्वकै लागि नयाँ खालको रोग हो । सजिलै मानिसमा सर्ने यो रोगको खास औषधि पत्ता लागेको छैन । लक्षणअनुसारको उपचार गर्ने विधि नै उपचारको महत्वपूर्ण विधि भएको चिकित्सकको भनाइ छ ।
विश्वका २१५ भन्दाबढी देशमा फैलिइसकेको उक्त रोग फैलिन नदिन सबैभन्दा महत्वपूर्ण भनेको सामाजिक दूरी काम गर्नु नै हो । सङ्क्रमण फैलिन शुरु गरेपछि भने उपचारविधिलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । रोगको उपचारमा अग्रपङ्क्तिमा रहने स्वास्थ्यकर्मी नै हो । स्वास्थ्यकर्मीमा पनि नर्सको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ ।
चिकित्सकले स्वास्थ्य जाँच गरेपछि उनीहरुलाई रेखदेख गर्ने, स्याहार गर्नेदेखि औषधि पानीको व्यवस्थापन र नियमित अन्य परीक्षणको काम नर्सले नै गर्नुपर्छ । नेपाल नर्सिङ सङ्घका अध्यक्ष प्राध्यापक मनकुमारी राई अहिलेको कोरोनाको कहरले नर्सिङ शिक्षालाई प्रभावकारी र गुणस्तरयुक्त बनाउनुपर्छ भन्ने पाठ सिकाएको बताउछन ।
शुरुआती चरणमा नेपाली नर्समा धेरै समस्या नभएको होइन । उनीहरु अन्यौलमा थिए । तर विस्तारै अभ्यस्त हुँदै नर्सललागयत स्वास्थ्यकर्मीले ठूलो साहसका साथ काम गरिरहेका छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कोरोनाको उपचारमा सक्रिय भएर लागेकामा आम स्वास्थ्यकर्मीको प्रशंसासमेत गरेका थिए ।
कोभिड–१९ कै कारण यस वर्षलाई विश्वस्वास्थ्य सङ्गठन ‘डब्लुएचओ० ले ‘नर्स तथा स्वास्थ्य स्वयंसेवीका वर्ष’ घोषणा गरेका सन्दर्भमा नर्स र स्वयंसेविकाको भूमिका अझै बढेर गएको छ । “यो बेलाको कोरोना कहरले नर्सिङ शिक्षालाई प्रयोगात्मकरुपमा लैजानुपर्छ, यो अहिलेको आवश्यकता हो भन्ने पाठ सिकाएको छ”, राईले आज स्वास्थ्य मन्त्रालयमा भएको कार्यक्रममा भने, “अबको स्वास्थ्य शिक्षा कस्तो बनाउने भन्नेमा पनि एउटा मार्गनिर्देश गरेको छ ।”
वर्तमान विषम परिस्थितिमा स्वास्थ्यकर्मीले जोखिमका साथ अस्पतालमा काम गरिरहेका छन् । नर्सिङ शिक्षालाई कसरी व्यावहारिक बनाउने भन्नेमा यो पटक केही समस्या देखियो । अध्यक्ष राईले अब जथाभावी संस्था खोलेर उत्पादन मात्रै गर्नुभन्दा गुणस्तर मापनमा ध्यान दिनुपर्ने बताए । कोभिड– १९ को शुरुआती चरणमा आवश्यक व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्रीको समेत समस्या देखिएको थियो । कस्तो सामग्री आवश्यक हुने, कस्तो प्रयोग हुने भन्नेमा पनि समस्या आयो । कोरोनाको सङ्क्रमणले स्वास्थ्य सामग्रीको गुणस्तरमा ध्यान दिनुपर्ने र त्यसको व्यवस्था पहिले नै गर्नुपर्ने कुरासमेत सिकाएको छ । यस विषयमा राईले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको ध्यानाकषर्णसमेत गराए ।
“फ्रन्टलाइमा नर्स, डाक्टर वा जो काम गरिरहेका छन्, गाह्रो समयमा खटिरहेकै हो, स्वास्थ्यकर्मीको हिम्मत जुटेकामा सराहना गर्नैपर्छ, उनीहरुलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ”, राईले थपे । उनले घर, गृहस्थी हेर्ने र कोरोना सङ्क्रमण भएका बिरामीको स्याहार गर्नुपर्ने दोहोरो काम भएकाले पनि नर्सका लागि विशेष ख्याल गर्नुपर्ने, उनीहरुको स्वास्थ्य जाँच गराउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए। अहिले दाताले दिएको पीपीई कस्तो छ । सङ्क्रमण रोक्न सक्छ कि छैन भने र गुणस्तर नाप्ने संयन्त्र आवश्यक भएको उनले बताए।
समन्वय समूह बनाएर व्यवस्थापनमा लाग्नुपर्ने आवश्यकता अहिलेको अवस्थाले देखाएको भन्दै उनले सरकारलाई सुझाव दिए । नर्स, डाक्टर, सुरक्षाकर्मी, सरसफाइकर्मी सबैलाई उपयुक्त सेवा दिनसके अझै उच्च मनोबलका साथ काम गर्नेतर्फ पनि उनले ध्यानाकर्षण गराए । उनले कोभिड–१९ रोकथामका लागि सबै क्षेत्रमा काम गर्ने नर्स, चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मीको कामको प्रशंसासमेत गरे। मन्त्रालयका प्रवक्ता डा देवकोटाले कोभिड– १९ को रोकथाममा नर्स तथा स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको भूमिका महत्वपूर्ण हुने बताउछन ।
हेटौँडा अस्पतालका दुई चिकित्सकसँग स्पष्टीकरण माग १ महिना पहिले
पर्साका दुई चिकित्सक राष्ट्रिय स्वास्थ्य सम्मानपत्रद्वारा सम्मानित २ महिना पहिले
मन्त्रालयले भन्यो चिकित्सक परामर्श शुल्क वृद्धिमा कुनै निर्णय भएको छैन् २ महिना पहिले
चिकित्सकले बिरामी जाँच गरेवापत लिने परामर्श शुल्क बढ्याे २ महिना पहिले
बिना शल्यक्रिया मुटुरोगको नेपालमै उपचार ३ महिना पहिले
पहिलो सन्तानपछि कति समयको अन्तरालमा अर्को जन्माउने ? ३ महिना पहिले
सोमबार पाँच अर्ब २० करोड बराबरको ट्रेजरी बिल विक्री हुने ४ मिनेट पहिले
धादिङको गजुरीमा दुई हेलिकोप्टर आकस्मिक अवतरण ६ मिनेट पहिले
नेपाल समूहद्धारा आयोगमा लिखित निवेदन दर्ता १३ मिनेट पहिले
स्याङयोङ्गको आईएमएस मोटर्सले ल्यायो नव वर्ष अफर ३१ मिनेट पहिले
विश्वभर कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या ३० लाख नाघ्यो ३५ मिनेट पहिले
जापानद्वारा फाइजरलाई थप खोप आपूर्तिको लागि आग्रह ३८ मिनेट पहिले
सङ्घीय शिक्षा ऐनमा व्यवस्थापन समितिको भूमिका थप स्पष्ट गरिने ४७ मिनेट पहिले
बाग्मती प्रदेशमा एमाले संसदीय दलको बोर्ड गठन २ दिन पहिले
भारतबाट आजै नेपाल आएका १४ जनामा कोरोना १ दिन पहिले
नयाँ बसपार्कका टिकट काउण्टर बुधबारदेखि बन्द हुने ७ दिन पहिले
राष्ट्रपतिसमक्ष राजदूतले प्रस्तुत गरे ओहोदाको प्रमाणपत्र २ दिन पहिले
अब हिंसा गर्ने कुनै समूह छैन : प्रधानमन्त्री ओली ४ दिन पहिले
अनमोल आजबाट २७ बर्षमा प्रवेश ३ हप्ता पहिले
महिलाहरुको वेदना बिर्साउने चौतारी बन्दै समूह १ हप्ता पहिले
एप्पल संस्थापक जब्सकाे दरखास्त अढाई करोडमा लिलाम ३ हप्ता पहिले
संसदमा तथ्य र तथ्यांकमा टेकेर बहसमा आउन थापाको चुनौती १ हप्ता पहिले
सबैभन्दा बढी आयकर तिर्नेमा सूर्य नेपाल प्राली २ हप्ता पहिले
वास्तविक क्षेत्रका कम्पनीलाई शेयर बजारमा ल्याउन ‘बुक बिल्डिङ’ ४ हप्ता पहिले
तपाईको आजको राशीफल कस्ताे छ ? १ महिना पहिले
ओली सरकारलाई विदाई गर्नु प्रतिपक्षको धर्म ! डा.भट्टराई ३ हप्ता पहिले
ओली र प्रचण्डबीच आज पनि वार्ता हुदै ९ महिना पहिले
राजविराज राबा बैंकका १३ कर्मचारीसहित थप २५ जना संक्रमित ६ महिना पहिले